Sofia Food Paradise: May 2016
အချက်အပြုတ်ဝါသနာရှင်များအတွက်မိမိတတ်ကျွမ်းသမျှလေးများဝေမျှပေးရာ Blog လေးဖြစ်ပါတယ်
ငါးတဖွဲခြောက် - ၁၀၀ ဂရမ်
ခရမ်းချဉ်သ်ီး - ၅လုံး
ကြက်သွန်နီ - ၂လုံး
ကြက်သွန်ဖြူ - ဆယ်မြောင်း
ငရုပ်သီးစိမ်း - ၅တောင့်
ငရုပ်ပွ - တစ်လုံး
အရောင်တင် - အနည်းငယ်
ဆား - တစ်ဇွန်း စားပွဲဇွန်း
ဆီ - လိုသလောက်
Labels: ရှမ်းအစားအစာများ, ​ချက်​​ဟင်းအမျိုးမျိုး
နေရာဒေသအလိုက်ဟင်းချက်နည်းနဲ့စားသောက်ကြပုံဓလေ့များမတူကွဲပြားမှုတွေအများကြီးတွေ့ရပါတယ်။ဆိုဖီယာကတော့ရှမ်းမြောက်ပိုင်းသူမို့ေ တာင်ပိုင်းကစားလေ့စားထရှိတဲ့အစားအစာအချို့ကိုလေ့လာသင်ယူဖို့ဒီတလတောင်ပိုင်းနေရာအတော်များများကိုသွားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။တောင်ပိုင်းခရီးစဉ်တလျောက်အစစအကူညီပေးခဲ့ကြသောညီမလေးယွန်းဖူးဖူးနှင့်တကွရှမ်းအစားအစာများ၊အင်းသားအ စားအစာများနှင့်ဒေသအစားအစာသိလိုသည်များကိုစိတ်ရှည်စွာရှင်းပြချက်ပြပြောပြပေးကြတဲ့နောင်မွန်လွိုင်ကော်တို့မှဆွေမျိုးများဖြစ်ကြသောမမကြီးနှင့်ညီအစ်မများတူမလေးများအားလုံးကိုဒီပို့စ်လေးကနေကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါရစေရှင်...
ငါးရံ့ခေါင်း - ၅ လုံး
ခရမ်းချဉ်သီး - တစ်လုံး
ကြက်သွန်နီ - တစ်လုံး
ဂျင်းကြက်သွန်ဖြူထောင်း - တစ်ဇွန်း
ကစော့ခါးသီး - လက်တစ်ဆုပ်
ဆန်လှော်မှုန့် - ၅ဇွန်း စားပွဲဇွန်း
ဆေးခါးမှုန့် - တစ်ဇွန်း
ပူစီနံ - တစ်ပန်းကန်
ရေ - ၁.၅လီတာ
ဟင်းခပ်မှုန့် - အနည်းငယ်
(၆)အပျစ်အကျဲအနေတော်ပါကရေဆေး သန့်စင်ထားသောငါးခေါင်းထည့်ပြီး ဆူပွက်အောင်တည်ပေးပါ။
❀﻿❀﻿ ပူစီနံများများ၏အနံ့နှင့်ခါးသက်သော အရသာ၊ကစော့ခါးသီးခါးသက်သောအရ သာပါပြီး၍ဆေးခါးမှုန့်ကိုလျော့ထည့်နိုင်ပါတယ်။
Labels: ရှမ်းအစားအစာများ, ​ချက်​​ဟင်းအမျိုးမျိုး, ဟင်းချိုအမျိုးမျိုး
ပဲပြင်းစေ့ - နှစ်ဘူး
ပဲတောင့်ရှည် - တစ်စည်း
ရှမ်းပဲပုတ် - ၁ချပ်
ဂျင်း - လက်နှစ်ဆစ်
ဆား - ၁ဇွန်း စားပွဲဇွန်း
ဆေးခါးမုန့် - တစ်ဇွန်း
လုံးပွေရွက် - လက်တစ်ဆုပ်
ငါးစဖွဲခြောက် - လက်တစ်ဆုပ်
ငါးရံ့ - တစ်ကောင်(၃၀ကျပ်သားခန့်)
ဂျူးမြစ် - ၂၅ကျပ်သား (၄၀၀ ဂရမ်)
(၄)ဂျူးမြစ်ကိုရေဆေးသန့်စင်ကာတစ်လ က်မအရွယ်လေးများပိုင်းဖြတ်ထားပါ။
ပြီးလျှင်ဂျူးမြစ်နှင့်ငါးကြော်ထားသည်ကိုထ ည့်ပြီးသမအောင်မွေပေးပါ။
စားနေကျမုန့်ဟင်းခါးများနဲ့လုံးဝမတူတမူထူးခြားအရသာရှိတဲ့အင်းမုန့်တီချက်နည်းလေး ကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ချက်စားကြည့်ရေ အာင်နော်....
ငါးဖိန်း/ငါးကြင်း - ၅၀ကျပ်သား
ခရမ်းချဉ်သီး(အမာသီး) - ၇၅ကျပ်သား
ကြက်သွန်မိတ် - ၃၀ကျပ်သား
စပါးလင် - တစ်ချောင်း
ရှမ်းပဲပုတ် - ၅ချပ်
နှမ်းထောင်း - တစ်ပန်းကန်
ပုဇွန်ထမ်းငံပြာရည် - ၅ဇွန်း စားပွဲဇွန်း
ဆား - ၃ဇွန်း
ဟင်းခပ်မှုန့် - နှစ်ဇွန်း
မုန့်တီခြောက် - ၂၅ကျပ်သား
(သို့)အစို - တစ်ပ်ိသာ
Labels: ရှမ်းအစားအစာများ, ​ခေါက်​ဆွဲချက်​နည်းများ
ရှမ်းအစားအစာများကိုရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းမြောက်ပိုင်းဒေသအလိုက်လုပ်နည်းလေးတွေကွဲကြပါတယ်။ဆိုဖီယာကတော့မြောက်ပိုင်းသူပါ။ဒါကြော င့်တောင်ပိုင်းကစားလေ့စားထရှိတဲ့အစားအစာများကိုလေ့လာသင်ယူဖို့ဒီတလတောင်ပိုင်းနေရာအတော်များများကိုသွားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။တောင်ပိုင်းခရီးစဉ်တလျောက်အစစအကူညီပေးခဲ့ကြသောညီမလေးယွန်းဖူးဖူးနှင့်တကွရှမ်းအစားအစာများဒေသစာသိလိုသည်များကိုစိတ်ရှည်စွာရှင်းပြချက်ပြပြောပြပေးကြတဲ့နောင်မွန်နှင့်လွိုင်ကော်မြို့မှဆွေမျိုးများဖြစ်ကြသောမမကြီးနှင့်ညီအစ်မများတူမလေးများအားလုံးကိုဒီပို့စ်လေးကနေကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါရစေရှင် ...
ရှမ်းဆန် (ယာဆန်) - နို့ဆီဘူး ၃ဘူး
အာလူး - ၈၀၀ ဂရမ်
ကြက်သွန်ဖြူနနွင်းဆီချက် - တစ်ပန်းကန်
Labels: ရှမ်းအစားအစာများ, ထမင်းချက်​နည်းများ
Traditional Fish Rice
ရှမ်းဆန် (ယာဆန်) - နို့ဆီဘူး ၄ဘူး
ငါးရံ့ - တစ်ကီလို
ခရမ်းချဉ်သီး - ၄၀၀ ဂရမ်
ဆန်မှုန့် - ၃ဘူး(၄၅၀ဂရမ်) (နို့ဆီဘူး)
ဆား - တစ်ဇွန်း လ္ဘက်ဇွန်း
ဆော်ဒါ - ဇွန်းတဝက် လ္ဘက်ဇွန်း
ရေ - ၄ဘူးခွဲ (နို့ဆီဘူး)
ရေနွေးပူ - ၃ဇွန်း စားပွဲဇွန်း
ပဲပြုတ် - တစ်ပန်းကန်
နံနံပင် - တစ်စည်း
Labels: Snack And Appetizer, မြန်မာမုန့်များ
စူကြည်းလို့ခေါ်တဲ့ပန်းသေးရိုးရာဟင်းလေးကရိုးရိုးလေးနဲ့စားရတာအရသာအရမ်းရှိပါတယ်။မင်္ဂလာဧည့်ခံပွဲ ၊ ဧည့်ဖိတ်၊ မိတ်ဆုံစားပွဲတွေမှာ တည်ခင်းလေ့ရှ...
Pan fried Dumplings (Guo Tie) ဖက်ထုပ်ကြော်ဖက်ထုပ်ပြုတ်ဆိုတာအားလုံးနဲ့ရင်းနှီးပြီးသားအစားအစာတခုပါ။Dimsumတွေမှာလည်းထည့်ပေးလေ့ရှိပါတယ်။နှ...
ဇီချွမ်းဖက်ထုပ်ချဉ်စပ် Sichuan Spicy Wontons ဖက်ထုပ်ကိုဒေသအလိုက်ပုံစံအမျိုးမျိုးသုံးဆောင်ကြတဲ့အထဲကဇီချွမ်းပုံစံဖက်ထုပ်ချဉ်စပ်ပြုလုပ်နည်း...
Seafood Tom Yum တုံယမ်းဟင်းချိုကိုဒေသအလိုက်မတူညီတဲ့ပုံစံအမျိုးမျိုးချက်ကြပါတယ်။ ဆိုဖီယာရဲ့ယိုးဒယားဆရာနှစ်ယောက်ချက်တာလည်းတမျိုးဆီပါတယောက...
sofiafoodparadise. Simple theme. Powered by Blogger.